Vidal: Waxaan Joogayaa Juventus Si Aan Champions League U Qaado
Home » Horyaallada » Vidal: Waxaan Joogayaa Juventus Si Aan Champions League U Qaado
Mar 27, 2014 235 Viewed	Aidarous Comments Off on Vidal: Waxaan Joogayaa Juventus Si Aan Champions League U Qaado
Laacibka Kooxda Juventus ee Arturo Vidal ayaa soo bandhigay doonistiisa inuu ku sii negaado Juve, si uu u dhamaystiro ballantii ahayd inuu kula guulaysto horyaalka Yurub kooxda reer Turin.
Xi digan 26 jirka ah ayaa sanadkani u ahaa mid aad u weyn, isagoo kooxda u dhaliyey 18 gool, tartamada oo dhan, kuwaas oo ka qayb qaatay guusha horyaalka Talyaaniga ee ay gaadhay kooxda Juventus. Waxaanay wararka xanta ahi sheegayeen beryahaaba in naadiyada Madrid iyo Barcelona uu ugu jiro qorshaha koowaad ee ciyaaryahanada ay xagaagan soo xero gashanayaan.
Laakiin Vidal ayaa diiday inuu dhag jalaq u siiyo dawanada uga shanqadhaya dhinaca Spain , waxaanu sheegay inuu ku faraxsan yahay joogitaanka Juventus , go’aana uu ku gaadhay inuu horyaalka Champion ka kula guulaysto kooxda tababare Antonio Conte.
“Ma dhagaysto dalabyada iiga imanaya Spain, qoys-kayguna waxay ku faraxsan yihiin degenaanshaha Turin. Taasna waxaan ku celceliyey dhawr jeer. Waan ku faraxsanahay joogitaanka halkan.” Ayuu ku yidhi jariidada FourFourTwo.
“Waxaan la joogayaa Juventus, sababtoo ah gudoomiye Andrea Agnelli ayaa iga codsaday koobka Champions Leugue.”
Kooxda Juventus ayaa qarka u saaran ku guulaysiga horyaalkii saddexaad ee Seria A oo xidhiidh ah, una gudubtay rubuc dhamaadka horyaalka Europa Leugeu kadib markii ay ku soo hadheen wareega groups ka ee Champion ka.
# Italy# Wararka Maanta
Filed in Horyaallada Italy Wararka Maanta
Taageerayaasha Arsenal oo war Farxa...